Anker dia manambara vokatra vaovao mandritra ny CES 2022 | Vaovao momba ny gadget
Anker Innovations, ilay mpitarika eran-tany amin'ny elektronika mpanjifa sy ny teknolojia fameram-bola, androany dia nanambara vokatra vaovao avy amin'ny marika Anker, AnkerWork, eufy Security ary Nebula. Tafiditra ao anatin'izany ny bara fihaonambe video misy jiro mitambatra, lakolosy marani-tsaina misy fakan-tsary roa ary projector laser 4K portable miaraka amin'ny AndroidTV.
Ny AnkerWork B600 dia mampiasa endrika vaovao rehetra-in-iray izay manambatra fakan-tsary 2K, mikrofonina 4 ary fanamafisam-peo namboarina miaraka amin'ny bara maivana. Mety tsara ho an'ny fampiasana ao an-trano sy any amin'ny biraon'ny birao, ny endrika compact dia mametraka azy mora amin'ny monitor ivelany. Rehefa mifandray amin'ny alalan'ny USB-C, ny B600 dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny sehatra fihaonambe video mba hanome ny kalitaon'ny horonan-tsary mavitrika sy ny feo mazava tsara raha mitazona ny biraonao.
Ny eufy Security Video Doorbell Dual mitady hanampy amin'ny ady amin'ny halatra fidirana amin'ny alalan'ny fanomezana fakan-tsary eo anoloana 2K ihany, fa koa fakan-tsary 1080p mitodika faharoa mitodika midina izay natao hanaraha-maso ireo fonosana napetraka eo amin'ny tsihy. Ny fakan-tsary eo anoloana dia mampiasa zoro fijery 160º (FOV) raha ny fakantsary mitodika amin'ny tany kosa mampiasa fahitana 120º mba hampisehoana sy hanaraha-maso mora foana ny fonosana.
Nebula Cosmos Laser 4K ary ny Cosmos Laser no projectors laser premium avo indrindra. Ny Nebula Cosmos Laser 4K ambony indrindra dia manana resolution 4K UHD raha ny Nebula Cosmos Laser mahazatra dia manana resolution 1080p Full HD. Ny fahatongavan'ny teknolojia laser dia manome evolisiona vaovao amin'ny fanomezana projector an'i Nebula.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Events » Anker dia manambara ny vokatra vaovao ao amin'ny CES 2022
HyperX dia namoaka ny CES 2022 miaraka amin'ny écouteur sy periferika